မပေါ့ဆသင့်ပါ အစာအိမ်ကင်ဆာ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဒီဇင်ဘာ 13, 2019 Pakpong Wathanaoran, M.D. Pathipat Durongpongkasem, M.D.
အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အရေအတွက်မှာ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် ၂ ဆ ပိုပါတယ်။
လေပွခြင်း၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်း၊ အမြဲလိုလို အစာမကြေဖြစ်ခြင်း၊ ပျို့ချင်အန်ချင်ဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း စတာတွေဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ချင်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Laparoscopic Gastrectomy နည်းလမ်းကတော့ အစာအိမ်ကင်ဆာ အစောပိုင်းနဲ့ ပျံ့ခါစအဆင့် အတွက် ခွဲစိတ်ကုသပေးဖို့ စံထားရတဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွဲစိတ်မှုဟာ ဒဏ်ရာ အနည်းဆုံး ဖြစ်တာမို့ အနာကျက်ဖို့လည်း မြန်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာဆိုတာ အစာအိမ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေ ပုံမမှန်မှုနဲ့ ပွားများလာတာကို ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တာကတစ်ဆင့် ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ကတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ ပျံ့နှံ့လာတတ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ကင်ဆာဟာ အစာအိမ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ကင်ဆာကိုတော့ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာ စတင်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိ အချက်အလက်များ
အစာအိမ်ကင်ဆာဆိုတာ ကာဆီနိုဂျင်ဓာတ်မြင့်မားတဲ့ အစားအစာများနဲ့ မီးကျွမ်းနေအောင်ကင်ထားတဲ့ အကင် စတာတွေကို စားသုံးရာကတစ်ဆင့် ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ တခြား အန္တရာယ်ရှိ အကြောင်းရင်းတွေ လည်း ရှိပါသေးတယ်။
အသက်ကြီးလာလေလေ အစာအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများလာလေလေပါပဲ။
အမျိုးသားများဟာ အမျိုးသမီးများထက် အစာအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ၂ ဆ ပိုပါတယ်။
သွေးရင်းသားရင်းထဲမှာ အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့သူရှိရင် ကိုယ့်မှာလည်း ဖြစ်လာနိုင်ချေ များပါတယ်။
H.pylori ဘက်တီးရီးယားတွေ ရှိနေရင် အစာအိမ်မှာ အနာဖြစ်လာပြီး အစာအိမ်ရောင်လာတတ်ပါတယ်။ မကုဘဲ ပစ်ထားလိုက်ရင် ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ နာတာရှည်ဖြစ်ပြီး အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်မယ့်ဘက်ကို ရောက်သွားပါတယ်။
အရင်တုန်းက အစာအိမ် ခွဲစိတ်ဖူးရင်လည်း နောက် ကြာလာတဲ့အချိန်မှာ အစာအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မွေးရာပါ သွေးအားနည်းတာတို့၊ နာတာရှည် အစာမကြေတာတို့ စတာ တွေ ရှိနေခဲ့ရင်လည်း အစာအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လေထုအခြေပြု ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ကာဆီနိုဂျင်များနှင့် ထိတွေ့မှု မြင့်မားခြင်း တို့ဟာလည်း အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အန္တရာယ် ကို မြင့်မားစေပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာလည်း အစာအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်လာဖို့ ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာဟာ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ လက္ခဏာပြမှု ကြီးကြီးမားမားမရှိတာမို့ အချိန်လွန်မှ သိကြရတဲ့အတွက် အလွန် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အစာအိမ်ကင်ဆာ လို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ပျံ့ နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေပွခြင်း၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်း၊ အမြဲလိုလို အစာမကြေဖြစ်ခြင်း၊ ပျို့ချင်အန်ချင်ဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း စတာတွေဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ချင်နေတဲ့ လက္ခဏာတွမို့လို့ အမြဲ သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒါတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ပေယျာလကန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကင်ဆာကို မွေးထားသလို ဖြစ်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ အခြေအနေမျိုးကို ကြုံတွေ့လာရပြီ ဆိုရင်တော့ ဆေးရုံ ဆေးခန်းကိုသာ အမြန်သွားပါတော့လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အချိန်အကြာကြီး တာရှည် အန် နေရင်
ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန် ကျ သွားရင်
အထူးသဖြင့် အစာစားပြီးချိန်မှာ အစာအိမ် အောင့် ရင်
ဆရာဝန်က လူနာရဲ့ ရောဂါမှတ်တမ်းကို စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာ တစ်ကိုယ်လုံး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု ကို ဦးစွာပြုလုပ်ပါမယ်။
Complete Blood Count, Fibrillation Test စတဲ့ သွေးနမူနာယူပြီး စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါမယ်။ ဝမ်း ကိုလည်း စစ်ပါမယ်။
Double-contrast barium swallowing X-Ray နဲ့ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည်ပြီး အစာအိမ်ထဲမှာ အကြိတ် ဒါမှမဟုတ် တခြား မူမမှန်မှုတွေ ရှိမရှိ ကြည့်ပါမယ်။
အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်း အစာအိမ်ထဲက မသင်္ကာဖွယ်ရာ တစ်ရှူးတွေကို ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဒီနည်းက double-contrast barium swallowing ဓာတ်မှန်ရိုက်တာထက် ပိုပြီး တိကျတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Endoscopic ultrasonography (EUS) နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် အစာအိမ်ကို ပိုပြီးတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားမြင် ရမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ အထဲက ရောဂါဟာ ဘယ်အဆင့် ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်း အင်္ဂါတွေကို ကွန်ပျူတာအခြေပြု ၃ ဘက်မြင် ရုပ်ကြွတွေနဲ့ မြင်ရမှာမို့လို့ အထဲမှာ ကင်ဆာဟာ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ပျံ့နှံ့နေပြီလဲဆိုတာကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
PET scan ကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီး အစာအိမ်ကို ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ ရှုထောင့်ကနေ သုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာပျံ့နှံ့နေမှုကို ဆန်းစစ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါအဆင့်အလိုက် အမျိုးမျိုး ကုသပေးရပါတယ်။ အောက်ပါ ကုသနည်းတွေကတော့ အသုံးများပါတယ်။
ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်ကတော့ လက္ခဏာမပြတဲ့အတွက် သိဖို့ခက်ပါတယ်။ တာရှည် ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ဖြစ်နေလို့၊ အစာမကြေဖြစ်နေလို့ ဆရာဝန်နဲ့ပြတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်တဲ့အခါကျမှသာ ဆရာဝန်က စမ်းသပ်လို့ သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကင်ဆာအဆင့်မှာဆိုရင် အစာအိမ်မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီး မူမမှန်တစ်ရှူးတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပေျာက်ကင်းအောင် အချိန်မီ ကုသနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာ ကြီးထွားမှုအဆင့်မှာ ရောက်နေပေမယ့် တခြားနေရာတွေကို မပျံ့သေးဘူးဆိုရင် ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ပြန်ရည်ကြောအကြိတ်တွေကို ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ခီမိုသရာဖီ ကုထုံးက နောက်က လိုက်ပေးရပါမယ်။
ကင်ဆာဟာ ဝမ်းဗိုက်နံရံတစ်ရှူးတွေ စတဲ့ အခြားဆက်စပ်နေရာတွေကို ပျံ့နှံ့နေပြီဆိုရင်တော့ အရင်တုန်းကဆို ကုလို့မရတော့တဲ့အဆင့် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ HIPEC ခွဲစိတ်မှုနဲ့အတူ ခီမိုသရာဖီ ကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အပူပေးထားတဲ့ ခီမိုဆေးတွေကို ဝမ်းဗိုက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လူနာတွေဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး အသက်ရှင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ အဆုတ်တို့ အသည်းတို့အထိ ပျံ့နှံ့နေပြီဆိုရင်တော့ ခွဲထုတ်တာဖြစ်ဖြစ် ဆေးကျွေးတဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကုသလို့ မအောင်မြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ ခီမိုသရာဖီနည်းနဲ့ပဲ ရောဂါကို ထိန်းထားပေးပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေ မပြအောင် လုပ်ထားပေးတာပဲ တတ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ခေတ်မှာ အစာအိမ်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုကို ဗိုက်ဖွင့်ပြီးခွဲတာရော၊ မှန်ပြောင်းကတစ်ဆင့် ခွဲတာရော ၂ မျိုးလုံး အသုံးပြုပါတယ်။ ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်နဲ့ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ပြောင်းကြည့် ခွဲစိတ်မှုကတော့ လူနာဟာ အမြန်ဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်ပြီး အမာရွတ်လည်း သေးသေးလေးပဲ ကျန်ခဲ့မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ ရက်တွေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်ဟာ အတွေ့အကြုံရင့်ပြီးတော့ မှန်ပြောင်းကြည့်ခွဲစိတ်မှုမှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာကို ခွဲစိတ်ကုသမှုအပြီးမှာ ခီမိုသရာဖီကုထုံးဟာ နောက်က လိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကင်ဆာကို ထပ်တလဲလဲ ပြန်ဖြစ်မလာအောင် တားဆီးပေးထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တွေကို ပျံ့နှံ့သွားမှုကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ခီမိုသရာဖီကလည်း ပျို့တာ အန်တာတို့ အားယုတ်ပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ဖြစ်တာတို့ စတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတာမို့ ခီမိုဆေး သွင်းမယ် ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အနားယူမှု၊ ကြေညက်လွယ်တဲ့ အစားကောင်းကောင်းစားဖို့၊ ရေ များများသောက်ဖို့၊ ရောဂါနဲ့ ဆေးကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်သောကတွေကို တောင့်ခံနိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကုသမှုဟာ စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်လို့ ဆရာဝန် ရက်ချိန်းတွေကိုလည်း မပျက်မကွက် လာရောက်ပြသဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း ထပ်လောင်း သတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြဘဲ လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေခံယူခြင်းဖြင့် ရောဂါကို အချိန်မီ သိရှိကုသနိုင်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ “အစာအိမ်ကင်ဆာ” ဘေးမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ..။
မပေါ့ဆသင့်ပါ အစာအိမ်ကင်ဆာ အစာအိမ်ကင်ဆာဆိုတာ အစာအိမ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေ ပုံမမှန်မှုနဲ့ ပွားများလာတာကို ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တာကတစ်ဆင့် ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ကတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ ပျံ့နှံ့လာတတ်ပါတယ်။